Tapany Roa Amin’ny Fiainana : “Tsy Ho Sahiko Velively Ny Hiaina Any Bolivia izay iainako Eto Espaina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2015 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny čeština , Français, Español
“Tiako taperina eto Espaina ny antsasaky ny andro iainako ary tsy mahita afa-tsy teny tsara aho hiresahana izany. Mitovy amin'izany koa ho an'i Bolivia.” Sary manokana an'i Diana. Alàlana nomeny no namoahana azy
Ity no fihaonana fahatelo amin'ilay andianà antsafa itrandrahana ireo zavatra iainan'ny Amerikàna Latina izay mandao ny firenena niaviany hikatsaka fomba fiaina vaovao sy hafa, izay azonareo vakiana ato. Navoaka voalohany tao amin'ny biloagin'i Ana ity antsafa manaraka ity, ary ao anatin'ny tovana amin'io bilaogy io natokana ho an'ny antsafa. Ao anatin'ity lahatsoratra ity i Ana Hernández dia miresaka amin'i Diana Dorado Cañellas, tovovavy Boliviana nandao ny fireneny efa ho roa ambinifolo taona lasa izao. Ho an'i Diana, nitondra ho amin'ny fiainana misasaka roa izany, ka mitàna toerana be ao anatiny ny fahatapahan'ny fifanarahana sy ny fitàran'ny fisainana.
Diana Dorado, midika tsiky sy teny mamy. Rehefa tsy maintsy hiresaka momba an'i Bolivia firenena niaviany izy, fidiany tsara ny hanaovana izany amin'ny fanafangaroana ireo toetra roa ireo. Mba hanazavàna hoe manao ahoana izany Santa Cruz de la Sierra izany, iray amin'ireo tanàna be mponina indrindra ao Bolivia, tsy mila mpitarika! Ny toetrandro fotsiny no mila tadidiana, ny sakafo ary ny olona.
Indrindra fa ny olona. Ho an'i Diana, io no singa fototra ho an'ireo izay mandao ny firenena niaviany :
Na dia sarotrarotra ihany aza ny fandehany any ampiandohana, vitanao ihany ny mahita hoe tsy maharitra ela izany. Tiako taperina eto Espaina ny antsasaky ny andro iainako ary tsy mahita afa-tsy teny tsara aho hiresahana izany. Mitovy amin'izany koa ho an'i Bolivia. Ary na ny mifanohitra amin'izany aza no miseho amin'izao andro izao, hoe ny olona eto maniry hifindra monina ho any [Bolivia], dia mety afaka manoro hevitra azy aho. Tsy ho sahirana ianao satria handray tsara anao ny olona.
Dimy ambinifolo taona i Diana fony tonga tao Espaina ary tsy tamin'ny sitrapony. Maro ireo fahasamihafàna nosedrainy. Teo aloha ny fahasamihafàn'ny toetrandro :
Eo ny hafanana andavanandro, ary miaraka amin'ny fiovàny tampoka manome anao ny hafanana sahaza, dia avy eo miditra anaty tontolo mangitsy, sy mitoka-monina. Tany am-piandohana, tsy te-hijanona mihitsy ianao. Ny fanirianao dia ny hiverina any Amerika Latina, avy eo tsy izay intsony ny zava-nitranga. Adino izany avy eo ary dia manomboka mahatsiaro ho metimety ny tena. […] Tamin'izany taona izany, ny voalohany, nanao asanà la vendimia (mpioty voaloboka) aho ary tao an-tsaina hatrany ny eritreritra hiverina hody any Bolivia amin'ny alàlan'ny vola voaangona. Saingy rehefa tonga tao ampaosiko ny vola, dia hevitra an'arivony maro indray no tonga tao an-tsaiko, mba hanararaotra hampiasa izany ao Espaina.
Ho azy, izay mbola ao anatin'ny faha-valo ambiroapolo taonany, tapany roa no mandrafitra ny fiainany. Saiky fotoana mitovy mihitsy no niainany teto Espaina sy tany Bolivia. Saingy tsy misaina intsony ny hiverina izy. Miova ny fahazarana ary mitombo ny fifangarihan-javatra. Milaza ho sambatra i Diana eto Espaina, mahazohazo aina miaraka amin'ny ankamaroanìny fianakaviany izay miaina tsy lavitra azy. Tohanany koa ny hoe betsaka ny fahalalahana mipoitra miaraka amin'ny fandriampahalemana. Tombony ny fahafahana miaina lavitry ny herisetra an-tanàndehibe mibahana toerana eny amin'ny ankamaroan'ny làlana ao Bolivia. “Ny tsy fahafahana mba mandeha irery eny an'arabe rehefa ilay vao maraina iny, tsy mahamanina ahy akory.”
Tantarain'i Diana anefa fa fiainana tena “nilamina” no niainana tany. Avy any amin'ny lisea mandeha mody, avy any an-trano handeha hianatra :
Ary ny Alahady any am-piangonana, na dia fanapahankevitro manokana aza ny amin'izany, satria tsy nanery anay hanaraka finoana itsy sy iroa mihitsy i neny. Fa dia izay fotsiny aho tamin'izany fotoana. Toy ny fandehandehanana miaraka amin'ireo anadahy sy zaobaviko ny fandehanana tany, satria tsy navelan-dry zareo handeha irery tany aho. Niova be anefa ny zavatra rehetra rehefa tonga teto Espaina aho.
Tsaroan'i Diana fa teo am-pahatongavana, “manomboka misaina zavatra betsaka ny tena, manomboka manontany tena misimisy kokoa momba ny zavatra rehetra ary manomboka mahita mazava ny idealy ho anao” :
Mazava loatra, misy idiran'ny taona io, saingy nosainiko mandrakariva ny hoe raha nijanona tany aho, tsy ho nanana fahalalahana betsaka hisaina toy izao. Eto, hafa no fijery ny zavatra rehetra. Momba ny resaka firaisana ara-nofo, ohatra. Any, tsy ho sahiko velively ny hitsotra hoe vehivavy tia vehivavy toa ahy aho, na dia amin'ny tenako aza. Na ny fahasahiana hamisavisa izany aza mety tsy ho nanànako akory…mety ny hakanosàna no nosafidiako. Fa eto, omena anao ny fahafahana hiaina malalaka, ny fahalalana tsara mihitsy fa tsy hanohintohina na hanao zavatra tsy mety ianao.
Ary tohizany hoe :
Any, tsy azo sainina ny hahafahanao mandeha irery vao maraina. Na ianao misy lehilahy entina miaraka aminao, na ianao mijanona ao an-trano. Eto, omena fahalalahana ianao.
Kanefa, miaraka amin'ny fanekeny sy ny fandàvany, babon'i Amerika Latina sy ireo fahasarotana hita ao aminy i Diana :
Tiako hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izy, indrindra noho ny fahasamihafàna misy ao aminy, izay ho an'ny olona sasany anefa dia antony hanavakavahana volonkoditra. Ao Amerika Latina, afaka mahita fanavakavahana maro ianao eo amin'ireo samy mponina ao. Zavatra iray izay tena tsy takatro velively. Aty Eoropa, hafa, tsy misy fanavahana intsony, fa tsy toy io ady anatiny mampaharary an'i Amerika Latina io.
Raha mikasika ny fanarahana vaovao indray, mahita i Diana amin'izao fotoana izao fa somary tsy maharaka izay miseho any amin'ny tany nahaterahany. Ny fifandraisany amin'ny andavanandron'i Bolivia dia amin'ny alàlan'ny fianakaviany sy ireo vavahadin-tserasera niomerika toy ny El Deber na ny fantsom-pahitalavitra Unitel, na Facebook. Feno potipoti-pahatsiarovana ny tantaran'i Espaina sy Bolivia ao amin'ny fijorona vavolombelona nataon'i Diana. Sy ny fomba fijery ny firenena roa tarafina avy any ivelany. Ao anatin'ny zavatra niainan'ity tovovavy Latino-Amerikana ity dia mifangaro ny maha-izy ny tena, ary mitohy ny fivoarana. Amin'izay niainany, mirafitra ao anaty sary iray ny eto sy ny any, ary tsy voatery foana hilaza zavatra iray mitovy:
Efa roa ambinifolo taoan aho izao no niaina lavitra an'i Bolivia. Ary na dia toa kely aza izany: ho ahy, antsasaky ny fiainako izay. Kanefa, ireharehako sy mahafaly ahy ny milaza hoe Boliviana aho. Na dia inoako aza fa, raha jerena avy lavitra, ny hany zavatra mba fantatry ny olona momba an'i Bolivia dia i La Paz, mbola any amin'ny toerana faharoa hatrany no misy an'i Sucre. Tiako ihany koa ny hoe ao amin'ny fireneko no misy ny tanàna avo indrindra manerantany, sy ny hoe izahay no manana ny salar (tany efitra rakotra sira) goavana indrindra, tahaka ny anananay zavatra maro hafa ao Bolivia, izay nambara ho Lovan'ny Taranak'Olombelona. Izany rehetra izany sy ny Majadito, mazava ho azy. Tsy adinoko ny sakafon'ny any.